Xarun lagu tababarayo Shaqaalaha laamaha socdaalka oo lagu kordhiyey garoonka Aadan cadde ( DAAWO SAWIRADA )
1/13/2013 5:35:00 P
Dhismahan cusub oo ka kooban dhowr qeybood ayaa waxaa dhismihiisa iska kaashaday dowladaha Somalia, Japan iyo heyadda duulimaadyada caalamiga ah ee IOM sida uu sheegay taliyaha hogaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Jen. C/llaahi Gaafow MaxÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â€žÂ¢uud oo munaasabadaas ka hadlay.
Munaasabad xariga looga jarayey xarun cusub oo loogu talo galay in lagu tababaro shaqaalaha Laanta socdaalka iyo jinsiyasaha dowlada Somalia ayaa maanta lagu qabtay garoonka dayuuradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho oo xaruntaas laga hirgeliyey. Waxaa munaasabadaas ka qeyb galay madax iyo saraakiil ka tirsan dowlada Somalia iyo diblmaasiyiin shisheeye oo ay ka mid ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Qaranka C/Kariin Xuseen Guuleed, Taliyaha ciidanka Booliska Jen. Shariif Shiikhunaa Maye, Taliyaha hogaanka socdaalka iyo Jinsiyadaha Jen. C/llaahi Gaafow Maxamuud, safiirka dowlada Japan u fadhiya Somalia danjire Takato Kashisa iyo saraakiil ka tirsan heyadda IOM.
Dhismahan cusub oo ka kooban dhowr qeybood ayaa waxaa dhismihiisa iska kaashaday dowladaha Somalia, Japan iyo heyadda duulimaadyada caalamiga ah ee IOM sida uu sheegay taliyaha hogaanka socdaalka iyo jinsiyadaha Jen. C/llaahi Gaafow Max’uud oo munaasabadaas ka hadlay.
“Waxaa Dhismahan uu ka kooban yahay qeybo ay ka mid yihiin meelo loogu talo galay iney ku nastaan shaqaalaha laanta socdaalka iskuna bedelaan kuwa shaqada galaya habeenkii iyo maalintii, sidoo kale waxaa jirta qeyb loogu talo galay in lagu tababaro, xirfadooda aqooneedna sare loogu qaado shaqaalaha waaxda socdaalka” ayuu yiri Jen. Gaafow oo intaa ku daray in dhismaha xaruntan uu ku baxay dhaqaale badan.
Qaranka ee xukuumada Somalia C/kariin Xuseen Guuleed oo isna munaasabadaas ka hadlay ayaa uga mahad celiyey dowlada iyo Japan iyo heyadaha kale ee gacanta ka geystay hirgelinta dhismahan oo uu sheegay inuu wax badan ka tarayo habsami u socodka howlaha hogaanka socdaalka iyo jinsdiyasada.
“Dowlada Soomaaliyed waxay ku dedaaleysaa iney abuurto jawi nabdoon oo dalku uu galo si dowladaha caalamka ee saaxiibada la’ah shacabka Soomaaliyed ay ugu soo dhiiradaan iney nagala qeyb qaataan dib u dhiska dalka iyo iney gacan naga siiyaan hirgelinta mashaariicda kuwan oo kale ah oo baahi weyn loo qabo” ayuu intaa ku daray wasiirku.
Xafladda Xilwareejinta dhismaha waaxda socdaalka
Khudbada Madaxa Hay’adda IOM ee Soomaaliya
Mr. Cali Cabdi
13 January 2013 Wasiirada sharaftaleh, safiirka dowladda Japan, agaasimayaasha guud, mudanayaal iyo marwooyin,
Waxaa sharaf ii ah in aan manta halkaan muqdisho oo ah magaala madaxda dowlada fedaraalka soomaaliya idinkala qeybgalo xafladda rasmiga ah ee furitaanka dhismaha waaxda socdaalka oo ka tirsan wasaarada arimaha gudaha iyo amniga qaranka ee dowladda soomaaliya.
Dhismahaan waxaa si hagarla’ahaan ah u maal galisay dowladda japan.wuxuu wax weyn katari doonaa in ay saraakiisha waaxda socdaalka oo dhan ee u fuliyaan sihabsami ah howshooda la xiriirta maareynata xuduudaha.
Dhismahaan waxaa kale oo uu suuragalinayaa in lagu qabto tababaro si joogta ah kor loogu qaadayo xirfadda saraakiisha ka shaqeysa waaxda socdaalka ee garoonka dayuuradaha iyo meelaha kale ee laga shaqeeyo taasoo waafaqsan sharciyada aduunka ee la isku raacay.
Waxaa kaloo intaa wehliya in sidoo kale looga mahadceliyo in dowladda Japan ay maalgalisay islamarkaana ay fulisayhay’adda IOM dhisma kale oo loogu talagalay waaxda socdaalka si ay ugu fuliso howlaheeda la xiriiraa socdaalka ee shaqaalaha diyaaradaha iyo dadka socdaalaya ee imaanaya Garoonka caalamiga ee Aadan Cabdulle.
Marka laga reebo dhismaha Hay’adda IOM ugu deeqday saraakiisha socdaalka oo ay ku fulinayaan howl maalmeedkooda.Waxaa kaloo mudnaan badan in la tilmaamo in hay’adda IOM ay qalabeysay dhismayaasha aan kor kusoo xusnay, qalabeyntaas waxaa ka mid ah baaritaanka shandadaha rakaabka, qalab sheegayo wixii bir ah iyo qalab isgaarsiin ee doo loogu talagalay saraakiisha socdaalka si ay u wadaxiriiraan dhexdooda si habsami leh. Ugudanbeynti rakaabka kadhoofaya garoonka muqdisho waxaa loo diyaariyay meel ay fariistaan kuna nastaan inta ka horeysa dhoofitaankooda.
Intaas waxaa dheer, Hay’adda IOM waxay hirgalisay hab lagu diiwaangeliyo laguna aqoonsado qofkasta oo soo dagayo ama ka dhoofayo garoonka iyo degadda, habkaas xog uruurinta ah waxaa loo yaqaanaa (PIRS), wuxuuna diiwaangalinayaa xogta ku qoran baasaboorada, raadka faraha ee qof walba oo dhoofayo ama soo dagaayo.Xogtaan la uruuriyay waxay wax kataraysaa in la sameeyo tirakoob sidoo kalana ay kafaaideystaan wasaaradaha kale. Waxay kaloo tilmaameysaa habka socdaalka iyo in ay aasaas u noqoto siyaasada iyo shuruucda loogu talagalay in lagu qorsheeyo maareeynta nabadgalyada.
Taageerida kabayaasha dhaqaalaha iyo taageerada farsamo ee IOM siisay waaxda socdaalka waxaa wehliya tababaro aqoontooda iyo xirfadooda korlooguqaadayo saraakiisha waaxda socdaalka.
Mar labaad waxaan halkaan ku qeexeynaa maalgalinta dowladda Japan oo ay Hay’adda IOM fulisay tababar 84 sargaaloo katirsan wasaarada arimaha gudaha, waaxda duulista hawada, dekadaha, wasaarada maaliyada iyo waaxda canshuuraha si kor loogu qaado tayada maamulida socdaalka iyadoo la siinayo tababar farsamo.
Dhawaan hay’adda IOM waxay bixisay tababar loo fidiyay 26 sargaaloo ka tirsan waaxda socdaalka si xirfadahooda kombuyuutarka iyo habka PIRS kor loogu qaado.
Tababarkaan waxaa qabtay qabiir soomaaliyeed oo arintaas kuxeel dheer oo ay IOM kulifaaqday waaxda socdaalka. Arintaas waxay hirgalineysaa in sihabsami ah gacanta loogu hayo islamarkaana loo gudbiyo xirfadaas iyo aqoontaas saraakiisha qaabilsan waaxda socdaalka.
IOM waxay aad ugu raja weyntahay in tababarada noocaan oo kala ah oo loo fidinaayo shaqaalaha waaxda socdaalka in la badiyo lana joogteeyo mustaqbalka.
Waaxda socdaalka sidoo kale waxay nasiib u yeelatay in ay hesho qabiir hormarinayo awooda maamul ee waaxda socdaalka qabiir kaasoo ay kusoo lifaaqday Hay’adda IOM si kor loogu qaado awooda maamul ee waaxda ayadoo lalatashanaayo saraakiisha sare ee waaxda socdaalka.
Xaalada xuduudaha waxay si halis ah u sameeysaa sida caadiga ah soomaali iyo boqolaal kun oo muhaajiriin ah taasoo ogolaaneysa in la galo danbiyo gudaha ah oo ay ku jirto ganacsiga dadka, dhoofinta sharcidarada ah ee biniaadamka, dhoofinta sharcidaradda ah ee badeecadaha, hubka iyo argagixisada.
Waxaan si dhab ah u rajeynaynaa aana filaynaa in dhismahaan, qalabka iyo tababarada ay bixisay IOM isla markaana sideeqsinima ah ay u maalgalisay dowladda Japan wuxuu ka taageeridoonaa dowladda soomaaliya in ay si tartiib tartiib ah awood ugu yeelato kagudbida caqbadaha kayimaada howlaha maamulka waaxda socdaalka ee soomaaliya si loo ilaaliyo sharafta biniaadamka iyo jiritaanka muhaajiriinta.
Gabagabadi, waxaan si daacadnima ah uga mahadcelinaynaa wadashaqeynta wanaagsan, caawinaada iyo xiriirka muhiimka ah ee wax kuoolka ahaa kaasoo lagu hormarinayay laguna xoojinayay xiriirka kadhexeeya dowladda soomaaliya iyo Hay’adda IOM.
Ugu danbeynti waxaan si qotadheer ugu mahadcelinayaa dowladda japan taasoo awood inoosiisay in aan si wadajir ah u hirgalino mashruucaan muhiimka ah.
Waxaan rajeynaynaa in aan sii wadno siiadkeynta xiriirkeena.
Aaad ayaad u Mahadsantihiin. Madaxdii ka qeyb gashay munaasabadaas ayaa markii dambe ku soo wareegay dhismaha cusub iyo qeybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay, waxayna u kuur galeen qalabka yaala iyo xafiisyada loo sameeyey waxaana warbixino ku saabsan qaabka loogu talo galay iney shaqadu u socoto ku siinayey howlwadeenada dhismahaas cusub. Sidoo kale waxaa halkaas ka hadlay safiirka dowlada Japan u fadhiya Somalia Takato Kashisa oo sheegay in ay dolwadiisu aad ugu faraxsan tahay dhismaha ay madaarka Nuqdisho ka hirgalisay